Waa maxay ujeedka Safarka RW Rooble ee Imaaraadka? – XAMAR POST
Raysal Wasaaraha Soomaaliya Eng Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa in maalmaha soo socdo ay safar ku tagaan magaalada Abu Dubai ee dalka Isu tagga Imaaraadka Carabta, kaasoo nooqnaya safarkii ugu horreeyay oo masuul dowladda katirsan Somaaliya ku tago dalka Imraadka tan iyo bilaawgii 2018-kii.
Maxamed Xuseen Rooble ayaa bilaawgii bishaan Imaaraadka Carabta ka raali geliyay falkii dhacay April 2018 isagoo fasaxay lacagtii laga qabtay, wixii markaas ka dambeeyay waxaa soo hagaagayay xiriirka dal inkastoo ilaa hadda Villa Somalia ay Qatar u aragto soo celinta xiriirka Muqdisho iyo Abu Dubai.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi saciid Muuse Cali ayaa 19-kii bishaan wadahadal qadka telephone-ka ah la yeeshay Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta iyagoo kawada hadlay safarka Rooble ee Imaaraadka Carabta sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo katirsan dowladda Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Imaaraadka Carabta ee Muqdisho Maxamed Axmed Al-Cusmaan waxaana la sheegay in uu ku wareejiyay farriin uu ka waday dalkiisa iyo casuumad ay Abu Dubia usoo dirtay Raysal Wasaaraha Soomaaliya.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowaan diiday in Imaaraadka loo celiyo lacagtii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee AadanC adde ee Muqdisho waxaana la sheegay in Villa Somalia ay wal wal weyn ku heyso soo celinta xiriirka Imaaraadka Carabta, maadaama lagu jiro xili doorasho.
Boqortooyada Abu Dubai waxay galangal xoogleh ku leedahay siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashada waxaana lagu tiriyaa wadamada carbeed ee ku hardamaya taageerada Murashaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya.